बाँ’चिएछ छ भने अर्को पोस्ट गरौंला साथी भाइहरू…. – PathivaraOnline
Home > स्वास्थ्य > बाँ’चिएछ छ भने अर्को पोस्ट गरौंला साथी भाइहरू….
बाँ’चिएछ छ भने अर्को पोस्ट गरौंला साथी भाइहरू….
admin January 22, 2022 स्वास्थ्य 0
यो म’र्मश्प’र्षी स्ट्याटस कोभिडसंग ल’डिर’हेका सुर्खेत जिल्ला गुर्भाकोट वार्ड ७, मेहेलकुनाका सन्त बहादुर राजीले सनिबार आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन । उनले आफ्नो स्टाटसमा आफुलाई नि’मो’निया भएको बताएका छन ।
उनले आफ्नो पोस्टमा थपेका छन ” भेन्टिलेटर चाहयाे भन्ने छ तर पाइएको छैन । सास त फेर्नै सकिन्न । बाँचिएछ छ भने अर्को पोस्ट गरौंला साथी भाइहरू ।”सन्त बहादुर सुर्खेत स्थित सुर्य ज्योति स्कुलका एकाउन्टेन्ट हुन । उनी हाल काठमाडौ टिचिङ अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन । कालोपर्दाले उनको आफन्तसंग गरेको टेलिफोन संवादमा उनलाई हाल अक्सिजन लगाएर राखिएको बताएका छन । *** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
त्यस्तै यो पनि हेर्नुहाेस्ः काठमाडौं, ८ माघ । बलिउड-हलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा सरोगेसीका माध्यमबाट आमा बनेकी छन् । उनले शुक्रबार राति १२ बजे इन्स्टाग्राममा एक पोस्टमार्फत यो जानकारी दिएकी हुन् । ‘यो कुरा बताउँदा हामी खुसी छौं कि हामी सरोगेसीका माध्यमबाट आफ्नो जीवनमा एक बच्चालाई स्वागत गरिरहेका छौं ।
हामी आफ्नो परिवारका लागि तपाईंसँग सम्मानपूर्वक आग्रह गर्छौ कि यो विशेष समयमा हाम्रो गोपनियतालाई ध्यान दिनुहोला,’ उनले लेखेकी छन् । सरोगेसीका माध्यमबाट छोरा या छोरी के जन्मियो भन्ने केही जानकारी दिएकी छैनन् । पछिल्लो तीन महिनामा प्रियंका बलिउडकी दोस्रो अभिनेत्री हुन्, जो सरोगेसीका माध्यमबाट आमा बनेकी छन् ।
यसअघि सन् २०२१ को नोभेम्बर १७ मा प्रीति जिन्टा पनि सरोगेसीका माध्यमबाट जुम्ल्याहा सन्तानकी आमा बनेकी थिइन् । प्रियंका र निक जोनासको जोडी बलिउडमा लोकप्रिय जोडीका रुपमा चिनिन्छन् । दुवैले सन् २०१८ डिसेम्बर २ मा उदयपुरको उम्मेद भवनमा हिन्दु र क्रिश्चियन रीतिरिवाज अनुसार विवाह गरेका थिए ।
४ बर्ष देखि आफ्नै शिक्षकले…
३५ बर्ष उमेरका उनलाई साना भाइबहिनीले समेत भाइ भन्छ्न्, उनलाई? (भिडियो हेर्नुस)